Hogaamiyaasha bartamaha dalka oo la filayo in maanta ay duco qaran u sameeyaan madaxweyne ku xigeenka | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Hogaamiyaasha bartamaha dalka oo la filayo in maanta ay duco qaran u sameeyaan madaxweyne ku xigeenka
Hogaamiyeyaasha isbahaysiga Jubilee ee kasoo jeeda Gobolka bartamaha dalka ayaa la filayaa in maanta ay munaasabad duco qaran ah u qabtaan madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo la tacaalaya kiiska dacwadeed ee ka yaalla maxkamada dambiyada dagaalka aduunka ee ICC.
Ducada ayaa sidoo kale Ruto lala wadaajinayaa saxafiga Joshua Arap Sang oo ay isku kiis yihiin.
Kulanka ducada ah oo ay masuuliyiin fara badan isugu imaanayaan ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda ka dhaco deegaanka Ruiru ee Countiga Kiambu.
Gudoomiyaha golaha xildhibaannada kasoo jeeda bartamaha Kenya iyo magaalada Nairobi ahna xildhibaanka degmada koonfurta Dagoretti Dennis Waweru ayaa sheegay ayaa sheegay in kulankooda maanta uu la mid yahay kii isbuuci hore ka dhacay magaalada Kuresoi ee Countiga Nakuru, kaasoo Mr Ruto loogu duceeyay.
Mudanahaan ayaa ku nuuxnuuxsaday in hogaamiyeyaasha bartamaha dalka ay ku mideysanyihiin ducooyinka lala garab taaganyahay 2-da muwaadin ee Kenyanka ah oo ay dhageysiga dacwadooda ka socoto maxkamada caalamiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada Hague.
Mr Waweru iyo masuuliyiin kale oo ay ka mid yihiin Gavanaha Countiga Nyeri Nderitu Gachagua, xildhibaanka magaalada Nyeri Esher Murugi, dhigiisa degmada Kieni Kanini Kega iyo xildhibaannada Otha Mary Wambui ayaa si wada jir ah maxkamada ICC-da ugu eedeeyay in ay qoomiyadda Kalenjinka si gaar ah u bartilmaameedsaneyso.